Daily နွရူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » Daily နွရူး
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jul 15, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Myanma News |9comments
၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး မရှိဂျောင်း သမတပေါဂွင့်ရ ပုပ်ကိုယ် ဦးရဲထွဋ်မှ ပြောကြားသဖြင့် အီတွန့်ဗွမ် လူမျိုးစာရင်းပေါက်ရန် ကြိုးပမ်းနေသော မဟုတ်တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီး မျှော်လင့်ချက် ဆုံးခန်းတိုင် သွားပြီဖြစ်သည်။
လက်ပံတောင်း အစီရင်ခံစာ ဆောင်ရွက်ချက်များအား ပြည်သူများ မကြေနပ်လျင် လွှတ်တော်ပျံ တင်ပြမည်ဟု ပုလဲအန်အယ်လ်ဒီအမတ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်မှ ပြောသောကြောင့် လွှတ်တော်ရှေ့တွင် လေယဉ်ပစ်အမြောက်များ ချထားဂျောင်း လေတပ်ဗိုလ်မှူး ဖားပြုတ်အောင် လေယဉ်ဆီ မှောင်ခိုလာရောင်းစဉ် သိရသည်။
UWSA စီးပွားရေး ဌာနဂျီးမှူး မိုက်ခဲကြေးမုံဂျီးနှင့် တြိဂံတိုင်းမှူး စမူဆာကြောင်ကြီးတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် အစိုးရမှ တောင်းဆိုသော ဝတပ်မြေပုံအစား ကြေးမုံဂျီး၏ စွဲမက်ဖွယ် ကိုယ်အတိုင်းအထွာ ၃၅-၂၃-၃၆ အား ကြောင်ကြီးကိုယ်တိုင် ပေကြိုးတိုင်းခွင့် ရသဖြင့် ပြဿနာ ပြေလည်သွားပြီဖြစ်သည်။
ဦးကျော်ဆန်းမှာ ရန်သူများခဲ့၍ သမဝါယတွင် ဝံဂျီးဖြစ်လျင် အခက်အခဲတွေ့မည်ဟု အထင်မှားခဲ့ကြောင်း ဗဟိုသမအသင်း အုတ်ကထ ဦးခင်မောင်အေးမှ ပြောကြားသဖြင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦး ဆက်သွယ်မှုအား စုံစမ်းခဲ့ရာ မဆလခေတ် ရပ်ကွက်သမအသင်းတွင် သူတို့နှစ်ဦး အုတ်ကထနှင့် ရေနံဆီဝေသူ လုပ်ခဲ့ဂျသည်။
နယ်စပ်လူဝင်မှု ကွပ်ကဲရေး ဌာနချုပ်အား ဖျက်သိမ်းလိုက်ရာ ဌာနချုပ်မှူး ဆာဒူးဂျီးကပေအား လောင်းကစားမှု ပပျောက်ရေးတပ်ဖွဲ့မှူးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားဂျောင်း နိုင်ငံဒေါ်အမိန့်ပြန်တမ်း ထုတ်ပျံသည်။
ဝတပ်နှင့် မြန်မာစစ်တပ်အကြား ပဋိပက္ခမှာ အောက်ပိုင်း အထင်မှားမှု သက်သက်ဖြစ်သဖြင့် နောင်အလားတူ မကြုံစေရန် နှစ်ဖက်အမျိုးသမီးများ စကပ်၊ ထမီ ဝတ်ဆင်ရန်၊ ဘောင်းဘီဖြစ်ပါက ဖင်ကျပ်နှင့် သရီးကွာတား အတိုဝတ်ရန် သဘောတူခဲ့ဂျသည်။
GWအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ကိုဝေဖြိုးအား ဆိုင်းငံ့ထားသည့် ၁၉၆၂ ပုံနှိပ်အက်ဥပဒေဖြင့် ပြည်အမှတ်(၁) ရဲစခန်းမှ ဖမ်းဆီးခြင်းအတွက် ပျံကျားရေးဒုဝံဂျီး ဦးရဲထွဋ်မှ ပြည်ထဲရေးဌာနသို့ တရားဝင် စာပို့မေးမြန်းလိုက်သော်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ အကျင့်ပျက် ချစားနေမှုများကိုမူ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်မေးရန် သာဒင်းထောက်များအား လွှဲချသွားသည်။
ရာမာဒန်ဥပုသ်လအတွင်း ဂေဇက်ဗလီဆရာ မာမွတ်ခိုမ်နှင့် ၉၆၉ကြောင်ကြီး အပစ်အခတ် ရပ်ထားသော်လည်း သမီးဒေါ်လေး တယောက်ထဲရှိချိန် ရှာပွတ်အိမ်ဒေါ်အား အလစ်စီးနင်းခွင့်ရှိဂျောင်း ကြားဝင်စေ့စပ်သူ ဂဇက်ရွာ ဘင်္ဂါလီ ကိုယ်ဆားလှယ် ကလိုင်းဖင်မှောင်ထံမှ သိရသည်။
သတင်းကြားဖြတ် အခိုးခံရမှု တားဆီးရန် ရုရှားစပိုင် အေဂျင်စီများမှ လက်နှိပ်စက် အသုံးပြုနေမှုကို အတုယူ၍ ဂေဇက်သဂျီး မာမွတ်ရှာပွတ်ခိုမ်မှ ကိလေသာ ထသည့်အခါ ကွန်ဒွန်ကို ဆိတ်အူဖြင့် အစားထိုး သုံးနေရာ စားပီး နားမလည် ဝါးပီး ထွေးထုတ် မလုပ်ဘဲ ဝက်အူချောင်းတွင် ရီဆိုင်ကယ် ပြုမည်ကို အများစိုးရိမ်နေသည်။
လိင်တူချသူ ဂျော်လကီအောင်ပုအား ဖင်လှန် လမ်းလျောက်မှုဖြင့် အရေးယူထားရာ တရားရုံးတော်တွင် ၎င်းက ဖင်လန်နိုင်ငံသူကဲ့သို့ မန်းကျုံးဘေး ခါးနွှဲ့လျောက်ခြင်းအား လီဆယ် ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထွက်ဆိုသည်။
လာမည့် ရွေးဂေါက်ပွဲတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ လူငယ်များကိုသာ ဦးစားပေး ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ရာ သဂျီးသာမီးဒေါ်ဂလေးနှင့် မောင်ကြောင်ကြီးတို့ ဂေဇက် အန်အယ်လ်ဒီ အမတ်နေရာအတွက် အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ရဖွယ်ရှိသည်။
ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဂေါင်းဆောင် ဆလိုင်းဖင်ပြောင်နှင့် အိုအိုင်စီအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ပင်လယ်ပျော့တို့ မက္ကာမြို့၌ လျို့ဝှက်တွေ့ဆုံစဉ် ကုတ်ချာကြောင်ကြီးသည် သဂျီးမာမွတ်ခိုမ်၏ ယုံကြည်အားကိုး ခြစ်လှစွာသော သားမက်လေးဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းကိုပိုင်လျင် ဂေဇက်ရွာကို ရပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထားသော မှတ်တမ်းအသံဖိုင် ထွက်ပေါ်လာသည်။
ခြစ်ကိုယ်ဂျီး မင်းကိုနိုင်ရေးသော “သူကြီးသားမက်၏သူငယ်ချင်း” ကဗျာစာအုပ်နှင့်အပြိုင် “သူကြီးသူငယ်ချင်း၏ သားမက်” ကချလာစာအုပ်အား ခြစ်တတ်သူကြောင်ကြီးမှ ခံစားရေးဖွဲ့ရန် ဂေဇက်သဂျီးဘော်ဒါ ကေအိုင်အေ သဗုံဘို ဦးမျိုးသန့်ကို ယောက္ခမအဖြစ် ချိန်ရွယ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ယောက္ခမ ဦးမျိုး ကြောက်လှ မူးဆိုး…
က​ကြောင်​လုပ်​တာနဲ့ ဝက်​အူ​ချောင်းစားတိုင်း သတိယ​နေ​တော့မှာဘဲ
ဒါနဲ့ ဦးမျိူးသန့်​က ဘယ်​နှယ်​ ကချင်​သဘုန်​ဖြစ်​သွားရတာဒုံး
ဒီ နွရူးမှာ မိုင်လေးမပါ၍
မတ်စေ့ပြီးရင် ငါးမူးစေ့လာမယ်လို့ ဟောကိန်းထုတ်ထားတာကို လွတ်အောင် ရှောင်နိုင်တယ်။
အုအုကျောင် နောက်ဆုံးကျမှ အပီဆွဲသွားဒဂိုး။ တခါဒဲယောက်ခမရှာပီး ပျောက်ရှင်းစနစ်နဲ့ သဗုံလုပ်ခိုင်း လိုက်ဒဂိုး။
ဆလိုင်းဖင်ပြောင်နဲ့ အေးဝတီကြီးသည် အတူတူပေလော?
နိုင်ငံတော်လျှို့ ဝှက်ချက်တွေ ကို ထပ်ပြီး ဖောက်ချနေပြန်ပီကလား
ဒါက ဝီကီလိခ် ထက် သာတဲ့